काठमाडौं भ्युटावर निर्माण अनिश्चित | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०८:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । मुख्य लगानीकर्ता पछि हटेपछि पुरानो बसपार्कमा २९ तलाको ‘भ्युटावर’ बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजना अनिश्चित बनेको छ ।
निर्माता कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोईले खोजेको मुख्य लगानीकर्ता सिंगापुरका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले आफ्नो लगानी फिर्ता मागेका छन् । बिकोई त्यही ठेकेदार कम्पनी हो, जसले खुलामञ्चमा अवैध सटर बनाई साना व्यापारीलाई भाडामा लगाएको थियो ।
पोखराका धीरज गुरुङमार्फत सिंगापुरका दुई सय ८० जना अवकाशप्राप्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले लगानी गर्ने भएका थिए । उनीहरूलाई कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर दिनेगरी सम्झौता भयो । त्यसका लागि गोरखा सैनिकले पहिलो किस्ताबापत २४ करोड रुपैयाँ कम्पनीको बैंक खातामा हालिदिए ।
रकम हात पर्नेबित्तिकै बिकोईले लगानीकर्तासँग विवाद झिक्यो । विवाद बढ्दै गएपछि गोर्खा सैनिकले लगानी फिर्ता मागे । बिकोईले २० जेठको भाकामा नोयल अमेल कम्पनीको नाममा २४ करोड रुपैयाँको चेक काटेको छ ।
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले गत पुसदेखि सांसदका पिएको तलब उनीहरुकै खातामा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । पिएको तलब…
बूढी आमा (कथा)
मात्सुओ बाशो (१६४४-१६९४) लाई जापानको सबैभन्दा महान् हाइकु कवि मानिन्छ । जापानको एडो कालमा उनी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थिए…
राष्ट्रियसभामा जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताजस्ता उम्मेदवार, किन देखिएन राष्ट्रिय अनुहार ?
काठमाडौं । ८ जेठ, २०५९ अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि…
राष्ट्रपतिको कतार भ्रमण स्विकृत गर्न मन्त्रीपरीषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको कतार भ्रमण स्विकृत गर्न मन्त्रीपरीषद्को बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने बैठक…
१५१ करोडको बैंक घोटाला: गभर्नरकै संरक्षणमा राष्ट्र बैंकमा लुकाइएको थियो फाइल !
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबपछि मात्र १५१ करोडको बैंक घोटाला सार्वजनिक भएको तथ्य खुलेको छ । १४…